Nepal Deep | देशको प्रतिनिधित्व गर्नु र निलो हेलमेट लगाउनु गर्वको कुरा हो: क्याप्टेन पाण्डे
देशको प्रतिनिधित्व गर्नु र निलो हेलमेट लगाउनु गर्वको कुरा हो: क्याप्टेन पाण्डे
शुक्रबार, फाल्गुन २१ २०७७
नेपाली सेनाकी क्याप्टेन रितु पाण्डेलाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघको ‘इन फोकस’मा फिचर गरिएको छ। उक्त अन्तर्वार्ताको नेपालीमा गरिएको अनुवाद नेपालदीपले यहाँ प्रस्तुत गरेको छ:
रितु पाण्डे २९ वर्षकी भइन्। उनि हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य नियोग सुडान(युएनएमआईएसएस)मा तैनाथ छिन्। यस अन्तर्वार्तामा उनले महिला सैन्य अधिकारी हुँदाको अनुभव, दक्षिण सुडानमा सेवा गर्दा, विश्वको सबैभन्दा नयाँ देशको अपरिचित स्थानहरूमा महिला टोलीको नेतृत्व गर्दाको अनुभव बारे बोलेकी छन्।
तपाईंले किन आफ्नो देशको सैन्य सेवामा सामेल हुने निर्णय गर्नुभयो?
म सैन्य परिवारबाट आएको छु – मेरो बुबा र हजुरबुबा दुवैले नेपाली सेनामा काम गर्नुभएको थियो। जतिबेला मैले आफ्नो बुबालाई सैन्य पोशाकमा देख्थे त्यतिबेला आँफू पनि कुनै दिन यसरी नै मेरो राष्ट्रको रंगमा सजिन चाहन्थे। मेरो हृदयमा त्यस्तो किसिमको ख्याल आउँथ्यो त्यसैले पनि मैले पढाई सकेपछि मेरा लागि सैन्य सेवामा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक छनौट थियो।
के तपाईंको परिवार र साथीहरूले शुरूदेखि नै तपाईंलाई समर्थन गरे?
पक्कै पनि। नेपाली महिलाले सदा पुरुषसँगै देशको स्वतन्त्रता र अखण्डताको लडेको इतिहास छ। भाग्यवश, मेरो श्रीमान् पनि सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ, र हामी दुवै दक्षिण सुडानमा नै खटाइएका छौं। त्यसैले पनि हामीले एक अर्कालाई हाम्रा व्यावसायिक लक्ष्यहरू र अवरोधहरूको व्याख्या गर्न आवश्यक पर्दैन। आफ्नो जीवनसाथी पनि सोही पेशामा कार्यरत हुँदा जीवन सजिलो हुँदो रहेछ।
तपाईं कसरी संयुक्त राष्ट्रको शान्ति सेनामा पर्न सफल बन्नुभयो?
संयुक्त राष्ट्र संघले जस्तै नेपाली सेनाले पनि आफ्नो समूहमा महिलाको संख्या बढाउन प्रयास गरिरहेको छ। विश्वभरि अहिले महिलाहरू समाजको आधा आकाश हुन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गइरहेको छ। त्यस्तै, सेना र प्रहरी जस्ता संगठनहरूले पनि उनीहरूको संगठनमा समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ। यो कुरा शान्ति मिसनमा पनि लागु हुन्छ। त्यसैले मलाई मेरो देशले युएनएमआईएसएसमा नेपाली सेनाको तर्फबाट भाग लिने अवसर प्रदान गर्यो।
मिशनमा तपाइँका जिम्मेवारीहरू के हुन् र तपाइँको दिन कसरी बित्छ?
म संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य नियोग सुडानमा कार्यरत आफ्नै महिला बटालियनको कमाण्डिङ अफिसर साथै त्यहाँ स्थित महिला सेनाको केन्द्रीय सम्पर्क नेतृत्व पनि हुँ। यो निकै चुनौतिपूर्ण काम हो किनभने मेरो जिम्मेवारी भित्र यो अन्तर्राष्ट्रीय नियोगको मातहतका नियमित सैन्य गस्तिको कामदेखि सम्पूर्ण महिलाहरूलाई सबै मूलधारका सैन्य कृयाकलापमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु समेत पर्दछ। यस मध्ये मलाई सबैभन्दा सन्तुष्टि दिलाउने काम भने यहाँका समुदायसंग पहुँच र सम्पर्क बनाउने कार्य हो – जस्तो कि हामीले सुदूर ग्रामिण वस्तिका वासिन्दाहरुबीच कोविड १९ सचेतना विस्तारको काम गरेका छौँ। अझ विशेष रुपमा, त्यहाँ पुगेर हामीले महिला र किशोरीहरुलाई भूमिगत सुरुङहरुको विष्फोटबाट बच्ने तरिका र महिनवारी स्वास्थ्यबारे चेतना फैलाएका छौँ। महिला र वालवालिका नै जनसंख्याको त्यो तप्का हुन् जो दक्षिण सुडानमा जारी व्याप्त द्वन्द र हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। मात्र महिलाहरुको सैन्य बटालियन कमाण्डर भएर शान्ति सेनाको मिशनमा काम गर्न जोडिन पाउँदा यहाँका स्थानीय महिलाहरुसंग उनीहरुका आशा, सपना, डर र अरु पनि धेरै कुराहरुमा आफ्नो योगदान र भावना बाँड्न पाउँदा एक किसिमको सन्तुष्टि र सजिलो भने महशुश गरेकी छु।
तपाईंलाई के लाग्छ महिला शान्ति सेनाले फिल्डमा कस्तो प्रभाव पार्छन?
भर्खरका नानीहरु जसले हामीलाई गस्तीमा बाहिर निस्किदा देख्छन्, उनीहरु अवश्य पनि हामीलाई देखर प्रेरित हुन्छन्। उनीहरू महिलालाई सेनाको बर्दीमा देखेर, पुरुष सहकर्मीसँग समान हैसियतमा काम गरेको देखेर उनीहरुले आत्मविश्वास प्राप्त गर्दछन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, महिलाहरू हामीसँग धेरै खुल्ने गर्छन। महिला र आमाका रूपमा हामी बीच समान चिन्ता छ; आफ्ना बच्चाहरू, परिवारहरूको बारेमा। म साँच्चिकै महसुस गर्दछु कि शान्ति सेनामा खटिएका महिलाहरुले शान्ति स्थापनार्थ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
जवान महिलाहरु जो शान्ति मिसनलाई क्यारियरको रूपमा हेर्दै छन् उनीहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ?
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफ्नै देशको प्रतिनिधित्व गर्नु र निलो हेलमेट लगाउनु गर्वको कुरा हो। मेरो सन्देश सबै जवान केटीहरुलाई जो शान्ति सेनाको रुपमा काम गर्न चाहँन्छन् – अघि बढ्नुहोस्। पुरुषले गर्न सक्ने तर तपाईले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही छैन।